Ka Gudubka Maandooriyaha - Dhammaan Talooyinka Si Loola Dhaqmo Xaaladdan | Ragga Stylish
Maandooriyeyaashu waxay isu soo bandhigaan siyaabo kala duwan sababo la xiriira ku tiirsanaanta walaxda, howlo aan lagu qancin ama xiriirro. Kahor, gudbintaan waxaa wax looga qaban karaa isticmaalka daroogada, tubaakada, aalkolada iyo khamaarka, laakiin waxaa jira arrimo badan oo u horseedi kara cudurkan shucuureed.
Ka guuleysiga balwadaha waxay ku dhacdaa caqabad weyn, in kastoo dhammaan caawimaadda dibaddu ay ka tarjumeyso anshax wax ku ool ah. Waa inaad sameysaa dadaal aad ku garaneyso xaaladaada oo aad u dejineyso gobolkaaga oo isku dayaya inuu isbedelkaas sameeyo. Natiijo ahaan, waqti iyo dadaal waxaad ku dambeyn doontaa inaad gasho jahwareerkaas taasna waxaa lagu qiimeyn doonaa dadaal shakhsiyeed oo weyn.
1 Qeexitaanka iyo nooca balwadaha
2 Cawaaqib xumadu maxay u horseeddaa balwad
3 Sida looga guuleysto balwadaha
Qeexitaanka iyo nooca balwadaha
Maandooriyuhu waa cudur jireed iyo maskaxeed oo shucuur leh oo ku tiirsanaanta walxaha laga abuuro, nooc ka mid ah waxqabadka ama xiriirka qof. Waxaas oo dhami waxay qofka u horseedaan inuu si qasab ah isugu mashquuliyo isticmaal ama waxqabad keenaya raaxo, isagoon taas ka warqabin mustaqbalka fog waxay kugu jiidi doontaa dabeecad is-baabi'in ah.
Qofkani waqti kadib wuxuu noqon karaa natiijo ka timaadda qabatinkiisa, Laakiin waxay kugu kici doontaa inaad ka takhalusto ku-tiirsanaantaas oo sida xaqiiqada ah waxaad horayba u sababi lahayd xoogaa sii xumaanaya caafimaadkaaga, noloshaada bulshada iyo shaqada.
Waxaa jira balwado aan la tirin karin oo dhici kara, in kastoo halkan aan ku soo aruurinno kuwa ugu badan:
Qabatinka Kiimikada Khamriga, tubaakada, daroogooyinka sida kookaha, hirowiin, xashiishad, dajiya, amfetamines ...
Balwado qaadasho sida dabeecadaha soo saara cuntada sida cunno xumida, bulimia ama cunitaanka badan, ee macmacaanka ...
Balwadaha akhlaaqda: sida khamaarka, galmada, shaqada, ku tiirsanaanta tikniyoolajiyada sida internetka, isticmaalka mobilada ku tiirsan, inaad dareento ku xirnaan joogto ah xiriirada, firqooyinka, xiriirka ...
Cawaaqib xumadu maxay u horseeddaa balwad
Waxaa jira calaamado dhowr ah oo la ogaan karo si loo saadaaliyo balwadda. Marar badan si tartiib tartiib ah ayey u muuqdaan oo si wada jir ah ama xitaa horumarkooda balwadda ah way ku kala duwanaan karaan xoogga, taas oo caadiyan kor u kici karta.
Calaamadaha ugu horreeya ayaynu ku eegi karnaa luminta xakamaynta isticmaalkeeda.
Dhammaan danaha iyo waxqabadyada maalinlaha ah way yaraan doonaan. Waqti iyo waqti badan iyo tamar ayaa lagu maalgeliyaa dabeecadaha noocaas ah.
Waxyeello saaxiibtinimo iyo mid qoys ayaa iman doonta in laga abuuro deegaankar, xitaa sawirkaaga shakhsi ahaaneed ayaa dhaawici kara.
Balwadaha badanaa waa la aqoonsadaa qofka, laakiin waxaa had iyo jeer looga jawaabaa diidmo dhexdhexaad ah maadaama ay ku caddaynayso dhaqankeeda. Taasi marwalba waxay u horseedi doontaa isdaba marin cuncun ah adigoon awoodin inaad ka baxdo.
Qofku wuxuu u yimaadaa inuu yeesho Dhibaato xakameynta shucuurtaada oo xitaa ay dhib ku tahay tarjumaadda dareenka dadka kale. Taasi waa sababta ay ugu soo bandhigto dhibaatooyinka iskuulka, shaqada, qoyska iyo jawiga dadka kale.
Sida looga guuleysto balwadaha
Dhibaatadan waxaa badanaa loo arkaa cawaaqib joogto ah. Waa inaan u adeegsanno daaweynta farsamooyinka garashada-dabeecadda, si qofku u barto xakamaynta dareenkiisa maadaama ay tahay rabitaan aan la xakamayn karin oo ah fikirkiisa.
Qiimee dhibaatada oo qir inaad adigu leedahay, waa halkaan marka aad go'aansan karto inaad u baahan tahay inaad sameyso isbedelkaas. Waa inaad aqbashaa xaqiiqda oo aad ka warqabtaa inaad balwad leedahay, haddii kale iskuma dayi kartid inaad horumar ku tallaabsato.
Waa inaad ilaalisaa rajo wanaagsan. Niyad wanaag iyo riixitaanka saxda ah ee lagu wajahayo dhibaatada ayaa yareyneysa natiijooyinka wax badan, waa inaad ka fikirto inaadan waalin oo aad markasta isku daydo inaad yeelato maskax furan. Falanqee waxa soo saaray cudurkan, laga yaabee inay kaa caawin doonto inaad si fiican u fahamto xaaladdaada shaqsiyeed.
Ka hadal dhibaatadaada oo raadso taageero. Caadi ahaan, kuwa la ildaran balwadda waa lagala noqdaa maxaa yeelay waxay yeeshaan dareen ah kalinimo iyo isfaham la'aan, waa sababtaas darteed waa inaad furto si aad taageero u raadsato. Haddii uusan jirin qof kugu xeeran, sida qoyska ama saaxiibbada, raadi caawimaad xirfad leh.
Ku biir koox taageero ah, waa mid ka mid ah xalka ugu macquulsan. Raadi kooxahan noocyadooda ah waxaadna arki doontaa inaadan kali aheyn, waxay isku dayeysaa inay indho indheyso in dad badan ay kujiraan isla xaaladaada. Waxaad baran doontaa dhageysiga iyo wadaagida khibradaada, waxaad dareemi doontaa badbaadin iyo talada ay ku siin karaan sidoo kale way ku caawin doonaan.
Raac dhammaan tilmaamaha laguu tilmaamay adiga. Haddii aad u tagtay daaweyn kooxeed ama xirfadle, isku day inaad raacdo talooyinka daaweynta, xitaa haddii ay u muuqdaan kuwo aan caqli gal ahayn. Maahan in wax walba loo raaco warqadda laakiin waad awoodi kartaa, laakiin inaad raacdo nidaam joogto ah dhammaan isbeddeladan, hubaal inay waxtar badan yeelan doonaan.
Waxaa jira baro inaad ka fogaato dhammaan xaaladaha kiciya rabitaanka cunitaanka. Waa inaad naqshadeysaa xeelado si aad uga fogaato, waayo tani waxay abuureysaa daqiiqado wanaagsan oo suuragal u ah caafimaadkaaga.
Daaweynta cilmu-nafsiga ee gacanta xirfadleyda waa hagaagsan yihiin, laakiin sidoo kale waa jiraan farsamooyinka hypnosis caafimaad, halkaas oo waxyaabaha miyir la'aanta ah ee kiciya inay yeeshaan balwaddaasi ay shaqeyn doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ka adkaato balwadaha